Nyocha onyx Apex, kagbuo mkpọtụ kacha arụ ọrụ? | Androidsis
Rafa Rodríguez Ballesteros | 04/10/2021 18:00 | Emelitere ka 05/10/2021 18:20 | Nyocha
Na gam akporo anyị na -anwale ụdị ngwa niile yana ngwa maka ekwentị anyị. Ọzọkwa, anyị enweela ike ịnwale ụfọdụ ekweisi TWS ikuku site na ụlọ ọrụ na -adịghị ezu ike, Tronsmart, nke ọhụrụ Tronsmart Onyx Apex. Ngwaahịa nwere mma mbinye aka nke ayi nāgwa kwa unu ihe nile n'uju.
Ọ bụ ihe a na -apụghị izere ezere na ị leelarịrị ekweisi ekwe ntị. Cable agbadala n'akụkọ ihe mere eme. Na ịchekwa gị nnukwu ọrụ nke ịchọta nhọrọ kacha mma, taa anyị na -ewetara gị ihe na -atọ ụtọ nke ukwuu. Onye nrụpụta ama ama nke nwere ogologo akụkọ ihe mere eme na -alaghachi ngwaahịa na elu nke kachasị.
1 Tronsmart Onyx Apex, ekweisi ị chọrọ
2 Ọdịdị anụ ahụ na imewe nke Tronsmart Onyx Apex
3 Kedu ihe Tronsmart Onyx Apex na -enye?
5 Uru na ọghọm nke Tronsmart Onyx Apex
Tronsmart Onyx Apex, ekweisi ị chọrọ
Ị nwere ike chọọ ha mana ị maghị ya. Dịka anyị na -agwa gị, ekweisi ikuku bụzi ihe mgbe ochie. N’oge na -adịbeghị anya, onye na -emepụta ekwentị ọ bụla tinyere isi na igbe nke ngwaọrụ ahụ. Ihe nke na -apụ n'anya n'oge na -adịghị anya.
Ọzọkwa, mmalite nke ekwentị onwe ha pụtara na njikọta ekweisi anaghị ekwekọ mgbe niile. Na nkenke, gịnị ọ bụ oge na -eche banyere wireless, na nhọrọ Tronsmart Onyx Apex sitere na Tronsmart karịrị ihe na -atọ ụtọ. Ị nwere ike ime nke gị Tronsmart Onyx Apex na Amazon na ọnụahịa kacha mma.
Ọdịdị anụ ahụ na imewe nke Tronsmart Onyx Apex
Mgbe ị na -ele ekweisi ikuku, ọ dị mkpa iburu n'uche usoro nke ya. N'okwu a, Tronsmart Onyx Apex bụ ụdị "Na ntị" ma ọ bụ aha ya bụ "intraural". Nke ahụ bụ ikwu, nke ewebatara na ntị. Ihe na-eme mkpuchi na uru ike dị mma n'ihe metụtara usoro ndị ọzọ.
Anyị hụrụ ụfọdụ ekweisi nwere a obere nha, ma ọ bụrụ na anyị atụnyere ha na ụdị ndị ọzọ ọbụlagodi ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya, dịka Onye ntụgharị T6. Akụkụ nke dị na ntị nke yiri “mkpanaka” n'ụdị AirPods Pro adịghị agbatị ogologo nke mere na ha na -enye onyonyo nwere uche. Anyị na -ahụ dị n'etiti mpụga akara Tronsmart, ozugbo ebe njikwa mmetụ dị.
Ma eji ihe maka owuwu ya, anyị na -achọta plastic na -egbu maramara na nwa. Naanị agba dị, opekata mpe. Metụ aka ha na -ele anya nke ọma na dị ka onye nrụpụta si kwuo, ha na -eguzogide ọgwụ mgbochi na oge. Agba nke dabara na ụtọ na ụdị ọ bụla. Echekwala ọzọ wee zụrụ ihe Tronsmart Onyx Apex na Amazon maka ihe na -erughị ka ị tụrụ anya ya.
N'akụkụ nke na -anọgide n'ime ntị ka anyị na -ahụ ndị na -ese okwu na -ese okwu. Anyị na -achọta ndị na -akwado ya na ndị na -emebi ihe, mana nke bụ eziokwu bụ ọtụtụ ndị nrụpụta na -ahọrọ ịgbakwunye ha na ngwaọrụ gị. Ndị masịrị ha na -ekwenye na, edobere ya nke ọma na nha kwesịrị ekwesị, nweta mmetụta na -enweghị oghere ma gbasaa àgwà nke ụda ahụ.
Kedu ihe Tronsmart Onyx Apex na -enye?
Obi abụọ adịghị ya, n'ahịa n'ahịa juputara na ngwaahịa ndị nwere ọmarịcha ibe ha, ihe dị iche na -eme site n'ihe ha nwere ike ịnye. Teknụzụ ahụ, njirimara ya na ihe niile pụtara ihe karịa ndị ọzọ nwere ike ikpebi mkpebi ikpeazụ maka ekweisi.
Tronsmart Onyx Apex nwere njirimara a Mbelata mkpọtụ ihu igwe ruru 28 dB, ihe na -adị mgbe anyị na -eji ha eme ihe. Teknụzụ ya pụtara ihe ekele maka mgbawa QCC3040 dị elu nke Qualcomm bịanyere aka na ya na-enye nkatọ ọnụnụ dị elu. Ụda bụ isi protagonist.
Maka njikọta, anyị na -ahụ Bluetooth kachasị elu. Anyị na -ekwu maka ya 5.2 Bluetooth, nke ya na nkwụsi ike njikọ yana ndakọrịta ka ukwuu n'etiti ngwaọrụ. Ụfọdụ ekweisi mma maka ojiji na mkparịta ụka ekwentị Daalụ gị Igwe okwu 4 nwere teknụzụ cVc 8.0 nke ahụ na -enweta ụda doro anya nke ọma na oku.
Ọ bụghịkwa ahụmịhe ige ntị n'azụ. Ha nwere ihe Ndị ọkwọ ụgbọ ala 10mm omenala maka bass miri emi. Egwu kachasị amasị gị, na -enweghị mkpọtụ n'èzí wee nwee mmetụta na ike na idoanya nke ụda dịka ịchọrọ. Ịtụ Tronsmart Onyx Apex na Amazon na free mbupu.
Nkebi nke nnwere onwe Ọ na -aghọkwa otu ihe dị mkpa mgbe ị na -ekpebi otu ma ọ bụ nke ọzọ. N'ihe gbasara Tronsmart Onyx Apex anyị na -ekwu maka nnwere onwe nke ruo awa iri abụọ na anọ jiri igbe nchaji. Na anyị nwere ike ịtụkwasị obi ruo otu awa na ọkara egwu maka naanị nkeji iri.
Oke nnyefe Ogwe 10
Ihe nkwụnye batrị 400 mAh
Batisi ekweisi 35 mAh
Isi okpu Awa 5
Nnwere onwe na okwu ịkwụ ụgwọ Awa 24
10 nkeji ụgwọ 1 hour nke iji
Ahụhụ bọtịnụ OBU
Aka elu SI
Oge ịkwụ ụgwọ ekweisi Awa 2
Nchaji oge ikpe Awa 2
Nkwado nnyemaaka olu SI
n'ọdụ ụgbọ mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri USB Cdị C
Akụkụ X x 63 30.1 41.85 mm
Ahịa 56.99 €
Linkzụta njikọ Tronsmart Onyx Apex
Uru na ọghọm nke Tronsmart Onyx Apex
Teknụzụ kagbuo mkpọtụ mkpọtụ na -eme ahụmịhe ige ntị nke ọma.
Nnwere onwe nke ihe ruru 24 awa na -eji nchaji
El njikwa aka ọ dị mma karịa bọtịnụ anụ ahụ site na ịghara itinye nrụgide na isi okwu.
Nkagbu mkpọtụ nọ n'ọrụ
Nnwere onwe ruo awa 24
na ihe mkpuchi roba ha ka bụ ihe mgbochi nye ọtụtụ ndị ọrụ.
La omimi bass na -eme ngalaba ụda na -ewere mkpa ọ kwesiri.
Bass dị omimi
Mgbe anyị nwere ihu ọma ka anyị nwee ike ịnwale ekweisi, ahụmahụ na ndị a na -enye anyị nwere ike bụrụ ihe dị mkpa maka ndị na -agụ akụkọ ndị a n'ịchọ data doro anya nke na -enyere ha aka ikpebi otu ma ọ bụ ụdị ọzọ. N'okwu a anyị ga -ekwu maka ya kagbuo mkpọtụ na -arụ ọrụ kedu ka ị mere Mara ihe dị iche kpamkpam na ọtụtụ ndị ọzọ anyị na -ahụ n'ahịa.
Ihe na: 4 October nke 2021
Mgbanwe ikpeazụ: 5 October nke 2021
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Nyocha onyx Apex, kagbuo mkpọtụ kacha arụ ọrụ?
Otu esi emepụta email nwa oge maka PS4 na PS5 wee nwee ọ Playụ PlayStation Plus n'efu